Seychelles Inoedzwa neTantalizing Cuisine yeGoût de France
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inoedzwa neTantalizing Cuisine yeGoût de France
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles Inoedzwa naGoût de France
Mumiriri weFrance kuSychelles, Anokudzwa Dominique Mas, akoka nharaunda yeSeychelles nevashanyi muSychelles kuti vapinde mumhemberero dzechiitiko chepasi rose chekugadzirira Goût de France / Yakanaka France iyo ichaitwa kubva Gumiguru kusvika Gumiguru 14, 22.
Mhemberero pachiitiko ichi ichave ichivakira pakubudirira kweshanduro dzakapfuura dzechiitiko cheGoût de France pasi rose.
Mwaka uno ichave ichiratidzira iyo Center-Loire Valley Dunhu ichiratidzira pfungwa ye eco-hushamwari gastronomy.
Gout de France inoramba iri chiitiko chakakosha kwazvo pasirese chikafu cheFrance uye mutero kune vese vabiki.
Iko kukokwa kwakaendeswa mumusangano wevatori venhau kubva kuFrance Residence kuLa Misère pamberi paDirector General weKuenda Kushambadzira kweiyo Seychelles Tourism Dhipatimendi, Mai Bernadette Willemin. Vachefu vanomiririra mamwe emabatanidzwa ekubatirana kuchirongwa cheGoût de France gore rino vaivepowo pakuvambwa kwechiitiko ichi.
Achivhura chiitiko ichi, Anokudzwa Dominique Mas akaonesa kuti mhemberero idzi dzichange dzichivakira pakubudirira kweshanduro dzakapfuura dzeGoût de France chiitiko pasi rose, iro gore rino richange richiratidzira Center-Loire Valley Dunhu richiratidzira pfungwa ye eco-hushamwari gastronomy .
"Mushure memakore akaoma aya apo hukama hwedu hwakakanganiswa nematambudziko ehutsanana uye ehupfumi, ndinofara kupemberera nhaka yedu yekuFrance pamwe chete neshamwari dzedu dzeSeychellois nevamwe vese vekunze kwechitsuwa ichi," akadaro Ambassador Mas. Akawedzera kuti, “Gout de France inoramba iri chiitiko chakakosha pasi rose kuchikafu cheFrance; asi zvakare mutero kune vese shefu nenhengo dzenzanga yekugamuchira vaeni vakatambura zvakanyanya mumwedzi yapfuura. ” Mumiriri akazvipira kushanyira maresitorendi masere nemahotera vachipa menyu yakanyorwa muSeychelles. "Ndinoziva kuti zvinogona kunge zvisina kunaka pahuremu hwangu, asi ndinoda kujoina vese vanoda chikafu vekuSeychellois uye kupemberera pamwe navo tsika dzeFrance uye hutsva," akadaro Mumiriri weFrance.
Vanoda gastronomy yakanaka yakatenderedza Seychelles vachange vachivamba kuwanikwa kweCentre-Loire Valley chikafu, icho chine hupfumi hwekunaka kubva kune zvigadzirwa zvemunyika, vachitarisira kuravira kwechizi, waini, uye inozivikanwa Tarte Tatin, yakagadzirwa nemaapuro e caramelized uye ikozvino imwe yemadhishi anozivikanwa zvakanyanya eFrance, ayo akatanga munzvimbo iri pedyo yeSologne muma1880.
Mai Willemin vakatambira kutangwazve kweGoût de France vachitaura kuti kuve nezviitiko zvakadaro kudzoka pakarenda yeSychelles kunodzosera chivimbo chenyika mukudzoserwa kwemaindasitiri edu ekushanya.
“Tinofara kukwanisa kupa rutsigiro kumuzinda weFrance nekujoinha mhemberero dzeGoût de France yegore rino. Mushure megore rekusava nechokwadi, zviitiko zvakaita seGout de France zvinounza mwenje wechiedza kune ramangwana reindasitiri yedu. "Gastronomy, kunyanya chikafu chinonaka, inofadza pamwe chete uye chikamu chakakosha chekuwanikwa uye ruzivo rwekuenda," vakadaro Mai Willemin.
Kutevera musangano wevatori venhau, vashanyi nenhengo dzenhepfenyuro vakatora maswiti akasiyana siyana anozopihwa mune mamwe maresitorendi ari chikamu chechiitiko muSeychelles.
Goût de France / Yakanaka France inorangarirwa munaKurume 20 gore rega. Kunze kwegore rino, chiitiko ichi chichaitirwa muna Gumiguru. Aya maresitorendi uye mahotera anotevera achapa mamenu akasarudzika kubva muna Gumiguru kusvika Gumiguru 14, 22: Club Med Ste Anne, Constance Ephelia, Constance Lemuria, Delplace, l'Escale, Hilton Northolme, Maia neMango House.